नेपालमा थप ११५४ जनामा कोरोना संक्रमण Canada Nepal
क्यानाडानेपाल डेस्क आश्विन ५ २०७७
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर एक हजार एक सय ५४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार एक सय ५४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६५ हजार दुई सय ७६ पुगेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । साथै ४७ हजार २ सय ३८ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् ।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार २२:०५:११ बजे : प्रकाशित